दक्षिण एशियाको राजनीतिमा इमरान ‘रोल मोडल’ बन्दै छन् ? - Jhilko
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पहिला पोख्त राजनीतिक नेताका रुपमा चिनिएका होइनन् । उनी क्रिकेटका पोख्त खेलाडी हुन । उनी पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री बन्दा गैर राजनीतिक भएकाले राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा जटिलता हुने धेरैले अनुमान गरे ।
अझ खासगरी पाकिस्तानको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप चर्काे हुने, मुस्लिम अतिवादीको जवर्जस्त प्रभाव र पश्चिमा देशहरुको ठाडो हस्तक्षेपको कुशलतापूर्वक ट्याकल उनले गर्नै सक्तैनन् भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, पाकिस्तानी प्रम इमरानले राजनीतिमा धेरै नै परिपक्व व्यवहार देखाएका छन् । राजनीतिलाई देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्ने मार्गदर्शन हो भन्ने व्यवहारतः पुस्टि गर्दै लगेका छन् । उनले देशभित्र र यस क्षेत्रको शान्ति स्थापना गर्ने कामको समेत व्यवहारतः अगुवाइ गरिरहेका छन् । उनी दक्षिण एशियाको परिपक्व राजनीति र जीवनशैलीको 'रोल मोडल' तिर गइरहेको आभास भइरहेको छ ।
सार्कको अगुवाइ गर्लान ?
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका दुई प्रमुख सदस्य देश भारत र पाकिस्तानले लिनुपर्ने गति लिन नसकेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
स्थापना भएयता पाकिस्तानमा सैनिक शासकहरूको वर्चस्व रहेको राजनीतिक अवस्था, भारतसँग भएको युद्धका कारणले पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा रहेको वर्तमानको बंगलादेश गुमाउनु परेको पीडाले पाकिस्तानको भारतसँग भई आएको शत्रुतापूर्ण व्यवहारले गर्दा स्थापनाको ३० वर्ष लामो समयमा सार्कले क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि हुनुपर्ने काम गर्न नसकेको कसैसँग लुकेको छैन् ।
यसो हुनुमा सार्कको प्रावधान र अर्को भारत र पाकिस्तानको मनसायमा दोष रहेको देखिन्छ ।
भारतले पाकिस्तानमाथि आफ्नो सुरक्षामा खलल पु¥याउने गरी आतंकवादीलाई संरक्षण गर्ने, तालिम दिने, हतियार दिने र आतंकवादी आक्रमण गराउने गराएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
पाकिस्तानमा क्रियाशील विभिन्न किसिमका संगठनहरूले हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको विभिन्न सञ्चार माध्यमका समाचारबाट उल्लेख भएका छन् ।
कानुनीरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने त्यस्ता संगठनहरू र तिनका नेताहरूलाई निर्बाध गतिविधि उपलब्ध गराएर भारतको शान्ति सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराएको आरोप भारतको रहेको छ ।
पाकिस्तानले त्यस्ता संगठनहरूले तिम्रा देशमा गएर आतंकवादी गतिविधि गराएको र त्यस्ता संगठनहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने खालको सप्रमाण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउ भन्दै आएको छ ।
यी दुबैले यस्तै संवादका आधारमा सार्कलाई अगाडि बढाउनमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । एकले अर्कासँगको निहुँमा सार्कलाई रोकेर राखिएको छ ।
पाकिस्तानमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री इमरान खानले यस क्षेत्रमा शान्ति र समृद्धिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यक्तिगत व्यवहारले दर्शाउँदै आएका छन् ।
आफूसँग स्रोत साधन भएर पनि देशको प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक पदमा बसेपछि कस्तो व्यवहार दर्शाउनु पर्छ त्यसको उदाहारण उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूका लागि गाडी खरिद गरिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि खरिद गरिएका बुलेटप्रुफ कारसहित विभिन्न कार, हेलिकप्टर र भैंसी समेत बिक्री गर्न लगाएका थिए । यसरी लिलाम गरी जम्मा भएको रकम सरकारी खजानामा जम्मा गर्न लगाएका थिए । यो व्यवहार यो क्षेत्रका साम्यवादी र समाजवादी नेताहरूको व्यवहार भन्दा धेरै अव्वल रहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
पाकिस्तानी क्रिकेटका पूर्व क्याप्टेन समेत रहेका खान आफ्नो समयका स्टार खेलाडी थिए । फोहोर भएको राजनीतिलाई सफा गर्न राजनीतिमा आएको भन्दै खानले समाजका राम्रा व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने आह्वान गरेका थिए ।
सन् २०१६ मा सार्क सम्मेलन हुन अघि भारतको उरीमा आक्रमण गरिएको थियो । त्यो आक्रमण पाकिस्तानमा संरक्षित लडाकु संगठनले गराएको आरोप लगाउँदै भारतले त्यहाँ आयोजना हुने सार्क सम्मेलनमा जान अस्वीकार ग¥यो । भारतले यसो भनेपछि माल्दिभ्सलगायतका देशले नजाने जनाएपछि त्यो सम्मेलन हुन सकेन् । यो पहिलो पटक भएको होइन् । भारतले पाकिस्तानमा आयोजना हुने सार्क सम्मेलनमा भाग लिनबाट पछि हट्दै आएको छ ।
खान प्रधानमन्त्री भएयता यसका लागि पहल लिएका छन् । आफूले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पुलवामा आक्रमणमा संलग्न भएका लडाकु संगठनको बारेमा कारबाही गर्न सकिने खालका प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनुस र यसमा कुन किसिमको अनुसन्धान गर्न खोज्नु भएको छ, त्यस किसिमको अनुसन्धानमा पाकिस्तान सघाउन तयार रहेको आग्रह गरेको खानले वार्ता प्रस्तावको सन्देशमा जनाए ।
पुलवामा आक्रमणको प्रतिशोध लिन भारतले पाकिस्तानको सीमामा प्रवेश गरी जैश ए मोहम्मदको आधार शिविरमा बम बिस्फोटन गराएको दाबी गरेको एक दिनपछि पाकिस्तानले भारतका दुई वायुसैनिक विमान मार हानी खसाएको दाबी ग¥यो । पाकिस्तानले आफ्नो सीमा खसेको विमानका चालक अभिनन्दन वर्तमानलाई शान्तिको प्रस्तावलाई थप प्रभावकारी बनाउन भारतलाई तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । सैनिक विमान चालक अभिनन्दनलाई फिर्ता पठाइएपछि खानलाई नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गर्नुपर्ने अभियानकर्ताहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका बेला खानले आफू त्यो पुरस्कारका लायक नभएको बताए । उनले ट्विटमा भने “काश्मिरी जनताको अपेक्षा अनुसार त्यसको समाधान गर्ने व्यक्ति नोबेल पुरस्कारका लागि योग्य हुनेछन् । अहिले म योग्य छैन ।”
त्यतिमात्रै होइन पाकिस्तानको खान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पाकिस्तानका अवैध घोषित गरिएका लडाकु संगठनको सम्पत्ति रोक्का गर्न त्यस्ता संगठनहरूको एक सूची बुझाएको छ । साथै अवैध संगठनमा सामेल रहेका ४० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई आशंकाका आधारमा पक्राउ गरी हिरासतमा लिइएको छ ।
खान नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा शान्ति कायम गराउने अपेक्षाका साथ पाकिस्तानी जेलमा रहेको तलिबानका संस्थापक नेतालाई रिहा गरी कतार पठाएको थियो । अमेरिकी प्रतिनिधिसँग शान्ति वार्ता अगाडि बढाउन तलिबानका संस्थापक नेतालाई कतार पठाइरहेका बेला भारत र पाकिस्तानबीच विमान हानहानको तनाव शुरू भएको थियो । यही तनावका बीच खानले शान्ति बहाल कायम गर्ने व्यावहारिक प्रदर्शन गरेको देखिएको छ ।
सार्कको द्रुत विकास र समृद्धिका लागि यी दुई देशबीचका आफ्ना विगतका द्वन्द्वलाई थन्काएर नयाँ सोचका साथ अघि बढनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि भारत र पाकिस्तानबीच एक हदसम्मको विश्वास कायम हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कम्तीमा आर्थिक विकास र लगानीका लागि पाकिस्तान जस्तै युद्ध लडिसकेको चीनसँग भारतले बनाएको सम्बन्ध झैं पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध बनाउन देखिएका बाधा र अवरोध हटाउने बेला भएको छ । यसमा दुबै देशको पहल उत्तिकै आवश्यकता छ । यसमा भारतको पाकिस्तानप्रतिको रवैयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर पाकिस्तनलाई सार्कको अगुवाका लागि धेरै गर्नुपरेको छ ।
विभिन्न क्षेत्रका क्रिकेट खेलाडीहरूको विविध विचार र शैलीलाई मिलाएर अगुवा गर्ने खान नेतृत्वको पाकिस्तानले सार्कको अगुवा लिन सक्लान त ? हुनत उनले मात्र चाहेर सार्क प्रभावकारी बन्दैन । भारतले पनि चाहनुपर्छ । उनले खेलेको सकारात्मक भूमिकामा भारतले पनि हात मिलायो भने यस क्षेत्रमा सार्क प्रभावकारी हुन्छ, शान्ति स्थापनामा महत्वपू्र्ण भूमिका हुन्छ ।
खानको अहिलेको अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट यो क्षेत्रका रोल मोडलको संकेत भने गरेका छन् ।
साँसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला
रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसलामा राजपाको आपत्ति, अध्यक्षमण्डलको आकस्मिक बैठक बस्दै
यो देशमा ‘पप्पु’ हरु कति छन् ? किन बन्दैनन् समयमै पुल ?
कतै पक्की पुल मुनि काठेपुल छन् त कतै हुरीले पक्की पुल नै उडाइदिएको छ ।
‘असल मित्र’ बितेको बाबुरामले पत्तै पाएनन् कि ? ः दुई दिनपछि...
आफ्नो असल मित्रको निधन भएको दुई दिनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइले...
कात्तिक १६ र १७ गते पोकली झरना महोत्सव
पोकली झरना क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना हुन लागेको...